Thursday October 15, 2020 - 08:56:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Helmand ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 askari ay dhinteen tira kalane ay dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood oo nuucoodu yahay helicopter kuwaas dhaawacyo ka daad guraynayay jiidda dagaalka.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda difaaca xukuumaddda Kaabuul ayaa lagu sheegay in laba diyaaradood oo sumaddoodu yahay M17 ay kusoo dhaceen mandiqadda Naawa ee gobolka Helmand xilli ay kuguda jireen muhiimad ah daad guraynta dhaawacyada askarta ku waxyeelloobay weerarada xooggan ee Jihaadiyiinta Taliban.
Cumar Zawaak oo ah afhayeenka guddoomiyaha gobolka Helmand ayaa u sheegay warbaahinta in xilligii ay isku dhacayeen labada diyaaradood ee helicopters-ka ah ay sideen askar dhaawac ah balse ay wada dhinteen dhaawacyadii iyo saraakiishii fayoobaa intaba wuxuuna wixii dhacay ku tilmaamay musiimo weyn.
Mas'uuliyiin Afghaniyiin ah ayaa sheegay in askarta dhimatay ay kamid yihiin illaa sedax sarkaal oo katirsanaa ciidamada kumaandooska ee lagu tababaray saldhigyada Mareykanka Afghanistan.
Wararka ayaa intaas ku daraya in diyaaradaha isku dhacay ay dhaawacyo kasoo daabuleen aagga degmada Nawa halkaas oo ay weeraro xooggan ka wadaan ciidamada Imaarada Islaamiga ah balse xilligii ay diyaaraduhu dib ugu noqon lahaayeen dhanka Kaabuul ay si lama filaan ah u burbureen.
Billaawgii isbuucan ayay ciidamada Taliban waxay qaadeen Olole dagaaleed aad uxooggan kaasi oo saameeyay dhowr degmo oo katirsan gobolka Helmand oo ay kamid tahay degmada LashkarJaah ee istiraatiijiga ah.